Xog laga helaayo tirada Ciidamo Ethiopian ah ee loo qorsheeyay Kismaayo |
Xog laga helaayo tirada Ciidamo Ethiopian ah ee loo qorsheeyay Kismaayo
Iyadoo maalmo ka hor Magaalada Kismaaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ay gaaren, Saraakiil dhowr ah oo kasoo jeeda dalka Ethiopia, ayaa waxaa haddana soo ifbaxaayo tirada Ciidamo u dhashay dalkaasi ee Kismaayo loo diyaariyay.
Sargaal ka tirsan DF Somalia ayaa xaqiijiyay in Ciidamada Ethiopian-ka ah ee loogu tallo galay in la geeyo Kismaayo ay yihiin ilaa 1,500 oo isugu jiro kumaan-doos iyo Ciidamo u tababaran la dagaalanka Maleeshiyaadka xagjirka ah ee Al-shabaab.
Waxa uu sheegay in ujeedka ugu weyn uu yahay in Ciidamada la dajiyo laba xarun oo ku kala yaalla garoonka iyo Dekadda Kismaayo.
Sargaalka ayaa intaa hadalkiisa ku daray in Saraakiisha iminka gaartay Kismaayo ay wataan doonyo iyo qalab Militeri oo uu sheegay inay adeegsan doonaan, sida uu hadalka u dhigay.
‘’Qorshuhu waxa uu ahaa in Ciidamadaani la dajiyo xarumaha ay ka baxeen Ciidamadii Sierra Leone, balse waxa ay ka baxeen balankii waxaana loo diyaariyay xarumo aan loogu tallo galin’’
Qorshaha Ciidamadaani lagu keenayo Somalia ayaa kusoo beegmeyso xili Ciidamo farabadan oo ka socda Ethiopia ay ku fashilmeen inay Al-shabaab ka saaran G/Sh/Hoose oo ku yaalla saldhigyo badan oo ay leeyihiin Cutubyo kale oo Ethiopia ah.